Waa maxay mawduucyada ugu caansan WordPress? | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waa maxay mawduucyada ugu caansan WordPress?
Waa maxay mawduucyada ugu caansan WordPress?
Mawduuca ayaa qayb muhiim ah ka ah degelka WordPress oo si wanaagsan loo diyaariyey. Mawduucyada WordPress si fudud ayaa loo dejin karaa ka dibna wax laga beddeli karaa. Waxay ka dhigaan degelkaaga mid aad u soo jiidanaya booqdayaasha, taas oo runtii ah waxa ugu muhiimsan, sax?
Si kastaba ha ahaatee, waxa dad badan ka welwelaya waa haddii dhajinta mawduuc gaar ah ama beddelidda mawduucyada ay saameyn doonto waxa ku jira bogga laftiisa.
Qoraaladaada, nooca bogga guriga, plugins, macluumaadka ayaa ahaan doona sidii ay ahaayeen ka hor intaadan go'aansan inaad wax ka bedesho.
Waxa isbedeli kara waa shayada la xidhiidha mawduuca laftiisa. Tusaale ahaan, haddii mawduuc gaar ahi leeyahay widgets la xidhiidha ama furaha-gaaban, way joojin doonaan shaqada.
Gabagabadii, wax kasta oo aan la xidhiidhin mawduuc gaar ah lama beddeli doono.
Markaad dooratid mawduuca WordPress ee aad rabto, aad bay u fududahay inaad dejiso. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto sida ay ugu habboon tahay boggaaga ka hor intaadan kicin - nasiib wanaag - ku dhawaad ​​dhammaan mawduucyada WordPress waxay leeyihiin bandhigyo online ah oo aad hubin karto.
Hadda aan aragno mawduucyada WordPress ugu fiican uguna caansan.
Divi hubaal waa mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan WordPress. Waxay ku siinaysaa xakamayn dhamaystiran oo ku saabsan naqshadaha.
Waxaad awood u yeelan doontaa inaad u habayso qayb kasta oo ka mid ah mareegahaaga faahfaahinta ugu yar.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo, wax kasta oo aad beddeshona si toos ah ayaad ula socon kartaa si aad u arki karto wakhtiga dhabta ah waxa ka dhacaya mareegahaaga.
U dhis muuqaal
Beddel xakamaynta iyo saamaynta
Hover habaynta gobolka
Soo hel oo beddel
Waxaad ku dari kartaa sliders, markhaatiyaal, wac ficil, goobo, iyo wax ka badan waqti yar.
Waxay leedahay in ka badan 1000 naqshadood oo loogu talagalay dhammaan noocyada niches: caafimaadka, ganacsiga e-commerce, moodada, makhaayadaha. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad calaamadiso niche gaar ah waxayna liis gareyn doontaa qaabab badan oo kugu filan oo aad ka dooran karto oo aad ka dhigi karto boggaaga mid weyn.
Markaad samaynayso naqshado gaar ah, waxaad ku kaydin kartaa maktabadda Divi oo isticmaal mar kasta oo aad rabto.
Ilaa goor dambe, Divi waxa kale oo ay bixisaa fursadaha tijaabinta. Sidan, waxaad u wanaajin kartaa qayb kasta oo ka mid ah mareegahaaga oo aad hagaajin kartaa liiskeeda Google iyo natiijooyinka raadinta browsersyada kale.
Qiimaha: Waxaad kala dooran kartaa inta u dhaxaysa helitaanka sannadkii oo ku kacaya $89 iyo gelitaanka nolosha oo dhan $249.
2. Mawduuca Boqortooyada
Mawduuca Boqortooyada ee ay abuurtay Wbcom Designs waa mid ka mid ah mawduucyada ugu sarreeya ee loo isticmaali karo goob kasta. Hadii ay tahay E-Learning platform ama goobta ganacsiga E-commerce ama baraha bulshada ee internetka sida Facebook. Mawduuca Boqortooyada waa hubaal inuu ku siin doono naqshadda iyo waxqabadka ugu fiican.
Reign ayaa kugu habboonaan doonta dhib malaha haddii aad uga cusub tahay WordPress ama naqshadeeye shabakad khibrad leh. Mawduuca waxa uu la socdaa saldhig aqooneed oo adag oo kaa caawin kara ka faa'iidaysiga mawduuca si buuxda.
Waa mawduuc gaar ah oo BuddyPress ah. Waxay ku daraysaa dhammaan awoodaha BuddyPress. Reign waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay dhistaan ​​shabakad bulsho-bulsho is dhexgal ah iyagoo isticmaalaya Hawlaha iyo Kooxaha, Saaxiibada Xubnaha, iyo wixii la mid ah. Reign waxay leedahay doorashooyin gaar ah oo la beddeli karo oo loogu talagalay BuddyPress taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay wax ka beddelaan dejinta.
Tilmaamaha Mawduuca Boqortooyada:
Naqshadaha Mareegta BuddyPress ee horay loo dhisay.
Kala Duwanaanshaha Madaxyada Badan.
Qaabka Tusaha Xubinta Badan & Kooxda.
Qaabka Xubin Badan & Kooxda Madaxa.
Si buuxda loo beddeli karo
BuddyPress Is-beddelka Ikhtiyaarada
BuddyPress Widgets dheeraad ah.
Joogta ah oo ka jawaabaya Dhammaan Aaladaha Waaweyn.
Module Profile Bulsheed oo La Dhisay.
Dulucda Diyaarsan WooCommerce
La-qabsiga Bogga dhisaha ee Elementor, iyo qaar kaloo badan.
Qiimaha Mawduuca Boqortooyada:
Mawduuca Reign BuddyPress WordPress waxa si toos ah looga iibsan karaa mareegta Wbcom Designs. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo iibsashada mawduuca Boqortooyada:
Shatiga goobta kaliya: $69
5- shatiga goobaha: $99
20-goob liisanka: $149
Mid kasta oo ka mid ah saddexda doorasho ayaa bixiya taageero iyo casriyeyn mawduuca hal sano ah. Cusboonaysiintaan waxaa lagu siidaayay dashboardka WordPress. Haddii nooc cusub oo WordPress ah la heli karo astaanta ogeysiiska ayaa la soo bandhigayaa si laguugu ogeysiiyo helitaanka cusboonaysiinta cusub. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka dhigto waxa ku jira mareegahaaga ilaa ugu dambeeyay.
Ultra waa mawduuc kale oo aad loo jecel yahay oo WordPress ah. Waxaa si gaar ah loogu talinayaa naqshadeeyayaasha iyo kuwa horumariya.
Waxay leedahay wax dhise fudud oo jiidid iyo tuuris ah sidaa darteed codayntu daruuri uma aha.
Ultra waxay siisaa isticmaaleyaasheeda naqshadaynta hargaha iyo bandhigyada horay loo sameeyay oo aad u habeyn karto sida aad jeceshahay iyadoo loo eegayo baahiyahaaga iyo waxa ku jira.
Haddii aad abuurayso mareegaha macaamiisha, tani waxay ku badbaadin doontaa waqti badan. Hal mar oo gujis ah, waxaad ku soo dhoofsan kartaa habaynta demo oo waxaad samayn kartaa muunad degel ah dhowr daqiiqo.
Ultra, waxaad haysataa kontorool dhammaystiran oo waxaad maamushaa wax kasta min madax ilaa cagta.
Mawduucan caanka ah ee WordPress wuxuu bixiyaa in ka badan 60 naqshadayn horudhac ah, 6 jaangooyooyin cagaha, 6 ikhtiyaari hore oo madax ah, 5 qaabaynta boostada oo keliya, iyo doorashooyin kale oo badan.
Astaamaha muhiimka ah ee Ultra waa add-ons, sidoo kale. Markaad iibsato Ultra theme, waxaad si bilaash ah u heleysaa waxyaabaha soo socda:
Jadwalka Qiimo u goynta
Addons-yadani waxay kaa caawin doonaan inaad abuurto degel ka jawaabaya oo soo jiidasho leh kaas oo aad u xiiso badan booqdayaashaada.
Tilmaamaha kale ee Ultra waa:
Xulashada qaabeynta smart
Qoraallada iyo midabada hore loo dejiyay
6 qaabaynta kaydka
Lix qaab oo kayd ah waxaa ka mid ah slider, mansory, grids, wideball, polaroid, iyo qaabka dhejiska.
Waxaa muhiim ah in la sheego in Ultra sidoo kale loo abuuray si loo hagaajiyo SEO si aadan uga walwalin haddii mawduucaaga WordPress uu si xun u saameyn doono booskaaga natiijooyinka raadinta.
Qiimaha: Qiimaha mawduuca Ultra wuxuu u dhexeeyaa $49 ee qorshaha qiimaha caadiga ah ilaa $89 ee qorshaha naadiga Master-ka.
4. Mawduuca Astra
Mawduuca Astra waa hubaal mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan WordPress maadaama in ka badan isticmaalayaasha 600,000 ay u doorteen shabakadooda ilaa hadda.
Waa mawduuc ujeedo badan leh oo aad u isticmaali karto nooc kasta oo mareegaha ah.
Astra waxay ku siinaysaa fursad ay kaga faa'iidaysato qaar ka mid ah mareegaha horay loo dhisay ee maktabadooda ama mareegaha bilowga ah oo ay ku badbaadiso waqti.
Uma baahnid xirfadaha codaynta si aad u habayn karto dulucda aad rabto maadaama ay aad u fududahay in la isticmaalo oo ay bixiso fursado badan marka ay timaado Customizer WordPress.
Qaar ka mid ah sifooyinka is-beddelka ayaa ah:
Midabada iyo qoraalka
Blog iyo boggaga kaydka
Astra sidoo kale waxay la midaysaa qaar ka mid ah qalabka ugu muhiimsan suuqa sida WooCommerce, Toolset, Elementor, iyo in ka badan.
Astra waxay haysaa maktabad aad u wayn oo horay loo dhisay markaa doorashadu runtii way wayntahay.
Astra waxay sidoo kale si fiican ula shaqeysaa kuwa wax dhisa bogga iyo maadaama ay aad u fududahay in la isticmaalo oo la habeeyo waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay bilowgayaasha WordPress sidoo kale.
Qiimaha: Mawduuca Astra waxa uu bixiyaa saddex xidhmo oo kala duwan: Astra Pro, Xidhmada Wakaalada Mini, iyo Xidhmada Wakaalada, oo leh qiimayaal u dhexeeya $59 ilaa $249 isdiiwaangelinta sanadlaha ah. Xirmooyinka sidoo kale way ku kala duwan yihiin sifooyinka la heli karo.
OceanWP waxay leedahay in ka badan 2 milyan oo la soo dejiyo taas oo sidoo kale ka dhigaysa mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan WordPress.
Waa mawduuc si buuxda u jawaabaya waxaana loo habeeyay qalab kasta, iyada oo aan loo eegayn meesha ay martidaadu ka imanayaan, waayo-aragnimadooda ayaa si isku mid ah u fiicnaan doonta.
Marka ay timaado qalabka tijaabinta xawaaraha, OceanWP waxay leedahay waqti rarista aad u degdeg badan. Waxa kale oo ay leedahay saldhig SEO ah oo lagu dhex dhisay, markaa waxay kaliya wax ku biirin kartaa booskaaga darajada Google.
Way ku fiican tahay shabakadaha e-commerce sababtoo ah qaar ka mid ah sifooyinkeeda xoogga leh:
Baabuur-qaadista Dhaladka ah
Sabbaynaysa Ku dar Baar Gaariga
Dami Shaandheeyaha Canvas
Muuqaalka Degdegga ah ee Alaabta
OceanWP waxay la shaqeysaa kuwa wax dhisa bogga ugu wanaagsan sida Elementor, Breeze, BeaverBuilder, iyo in ka badan.
Iyada oo la adeegsanayo demos OceanWP, waxaad ku abuuri kartaa mareegaha si fudud oo hufan.
Waxa kale oo ay bixisaa kordhinta ka dhigi doonta mareegahaaga xitaa mid ka sii fiican oo soo jiidanaya booqdayaal badan.
Qaar ka mid ah kordhinta OceanWP waa:
Ku dheji Wax kasta
Shabakadda duubista ee buuxa
Soo gal gal
Lug Dheg Leh
Bar-bareedka gaarka ah
Qiimaha: OceanWP waxay bixisaa saddex xirmo: Shakhsi (loogu talagalay 1 degel), Meherad (loogu talagalay 3 shabakadood), iyo Wakaalada (loogu talagalay 25 mareegaha). Sidaas awgeed, qiimayaashu waxay u dhexeeyaan $39 ilaa $129 gelitaanka sannadlaha ah.
Horumarka adduunka dhijitaalka ah iyo tignoolajiyada, waxyaabo badan ayaa noqda kuwa fudud. Mid ka mid ah waxyaalahaas ayaa hubaal ah in la dhisayo mareegaha WordPress.
Waad ku mahadsan tahay, dad badan oo badan ayaa shaqadooda ku qabsan kara online maanta. Dhismaha tayada iyo mareegaha soo jiidashada leh hadda dhib ma aha.
Mawduucyada WordPress ee aan ku soo sheegnay maqaalkan hubaal waa kuwa ugu caansan dhowr sababood dartood:
Aad bay u fudud yihiin oo si fudud loo isticmaali karaa.
Dhammaantood waa SEO la hagaajiyay, kaas oo ka ciyaara door muhiim ah marka dadku soo gudbiyaan su'aal oo aad rabto in laga helo natiijooyinka raadinta.
Waxay bixiyaan sifooyin kala duwan oo kor u qaadaya khibrada booqdaha. Mawduuc qiimo leh oo lagu daray mareegta soo jiidashada leh waxay sameeyaan isku darka guusha si ay u xiiseeyaan dhagaystayaashaada oo ay ugu sii hayaan mareegahaaga inta suurtogalka ah.
Ikhtiyaar badan oo waxka bedelka ayaa kuu sahlaya inaad si sax ah u muujiso aqoonsiga summadaada iyo inaad noqoto mid la aqoonsan karo.
Extensions iyo plugins waa wax dheeraad ah oo ka dhigaya fikradda oo dhan ee joogitaankaaga internetka xitaa ka sii fiican oo ka dhigaya boggaaga mid xirfad leh.
Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo si ay wax walba u shaqeeyaan xitaa si ka sii badan oo shaqeynaya.
Tusaale ahaan, markhaatiyadu waa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee caddaynta bulshada iyo sidoo kale faahfaahin fiican oo ku saabsan boggaaga.
Marka lagu daro faa'iidooyinka hore loo sheegay, waxay leeyihiin mid ka sii muhiimsan.
Waayo-aragnimada isticmaalayaasha hore u jiray waxay abuurtaa kalsooni marka ay timaado kuwa aan weli mid noqon. Sheekooyinka dadku runtii waa waxa iibsada, oo kelmad wanaagsan ama laba ayaa ku siin doonta adiga iyo ganacsigaaga kalsoonida.
Si aad u ogaato waxa markhaatiyadu u samayn karaan ganacsigaaga, isku day Premio Stars Testimonial plugin.
Waxaad arki doontaa korodhka heerka beddelka muddo gaaban.
Midkan ka sokow, waxaad ku dari kartaa plugins kale oo laga yaabo inaad ku habboonaato waxaad u soo bandhigto dhagaystayaashaada si qumman.
Si aan u soo gunaanado:
Suurtogalyadu runtii maanta waa kuwo aan dhammaad lahayn. Dadaal yar, waxaad dhisi kartaa degel gaar ah oo dadku si farxad leh ugu soo laaban doonaan.
Xogtaadu waa inay sidoo kale noqotaa mid tayo wanaagsan, waana meesha aad dhab ahaantii ku bixiso wakhtigaaga inta badan.
Sidaa darteed, si fiican uga faa'iidayso mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan WordPress iyo fududaynta fulinta, oo badbaadi naftaada waqti qaali ah.
Isla markiiba bilow!
Sida Loo Xayeysiiyo Ganacsiga Deegaankaaga Facebook-ga
Sida Loo Maareeyo Kanaalo Badan oo YouTube ah: Talooyin iyo Qalab